မ/ဒဂုံ(၄၉)ရပ်ကွက်တွင် ကလေးသူခိုးဖမ်းဆီးရမိခြင်း.။။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မ/ဒဂုံ(၄၉)ရပ်ကွက်တွင် ကလေးသူခိုးဖမ်းဆီးရမိခြင်း.။။။
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Oct 29, 2011 in News | 26 comments
၂၈/၁၀/၂၀၁၁ ရက်နေ့ ဒဂုံ မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် အမှတ်(၄၉)ရပ်ကွက်အတွင်းည(၉)နာရီခန့်က
ကလေးခိုးယူသော ဖြစ်စဉ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ် ကလေးခိုးယူသော သူများမှာ မှန်လုံ တောင်းအေ့ကားဖြင့် လာရောက်ခိုးယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လူသုံးဦး ပါဝင်တယ်လို့သိရပါ ကလေးခိုးယူသွားသည်ကို တွေ့၇ှိသူများပြောကြားချက်အရ ခိုးယူသူမှာ ကလေငယ်အား ပုဆိုးဖြင့် ပတ်ခြုံကာ
ပွေ့ချီ ထွက်ပြေးသည်ကို မသင်္ကာသဖြင့် ရပ်ကွက်က လူများမှ လိုက်လံမေးမြန်းရာမှစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ထိုသူဟာ ကလေး ကိုချထားခဲ့ပြီး ကိုယ်လွတ်ရုံးထွက်ပြေးစဉ် အမှတ်(၄၉) ရပ်ကွက် စိန်ပန်းလမ်းပေါ်မှ လူအများက အော်ဟစ်လိုက်လံဖမ်းဆီးရာတွင် ကလေးအားချထားခဲ့ပြီး ဒူးယား(၁၀)လမ်း ရေမြောင်း အတွင်းဝင်ရောက် ပုန်းအောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိ
ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဖမ်းစီးခံရသောကလေးမှာ (၁၀)အောက် ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သတိကင်းလွတ်နေကြောင်း စကားမပြောနိုင်အောင် မူးဝေစေသည့်ဆေးတစ်ခုခုတိုက်ကြွေးထားသည်ဟု ယူဆရကြောင်း ခလေးသူခိုးနှစ်ဦးကို ရပ်ကွက်မှလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုသူနှစ်ဦးမှာလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်..။။။
ဖမ်းဆီးရမိသော ခလေးခိုသူတစ်ဦးမှာ ပိန်ပိန်ပါးပါး“ ချင်း” လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရပ်ကွက်မှဝိုင်းဝန်ရိုက်နှက်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများမှ အမှတ်(၄၉) ရပ်ကွက်ရုံးအတွင်းထိမ်းသိမ်းထားစဉ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲဝင်များရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး
စိန်ပန်း လမ်းတစ်လျှောက်များပြားလှတဲ့လူအုပ်ကြီးအား ထိမ်းသိမ်းခဲ့ပါတယ် ရပ်ကွက်မှ လူများက ဖမ်းဆီးရမိသောကလေး
သူခိုးအားရုံးအတွင်မှ ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သော် လည်းရဲတပ်ဖွဲဝင်များနှင့် ရပ်ကွက်လူကြီးများမှ တားမြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းတရားခံအားရဲတပ်ဖွဲဝင်များမှ ခေါ်ဆောင်သွားလျှင် ရပ်ကွက်လူအများ၏ ရန်ပြုခြင်းကိုခံရနိုင်သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲဝင်
တစ်ယောက်အဖြစ် အသွင်ယူခေါ်ဆောင်စဉ် မှတ်မိသော ရပ်ကွက်မှလူများမှ ခေါ်ဆောင်သွားသော ဆိုင်ကယ်အားအုတ်ခဲ
တုတ်များဖြင့် ၀ိုင်းဝန် ပစ်ပေါက်ရိုက်နှက် ကြသဖြင့် ခေါ်ဆောင်ခြင်းမပြုနိုင်ဘဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်..။။
ည(၁၀း၃၀)ခန့် တွင်လုံခြုံရေးနှင့်ထိမ်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲဝင် များရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ရပ်ကွက် မှ လူများအားထိမ်းသိမ်း
နိုင်ခဲ့ပါတယ် သို့သော်(၄၉)ရပ်ကွက် လူအုပ်ကြီးမှာ ဆက်လက်များပြာလာကာ စိန်ပန်းလမ်းတစ်လျှောက် ပြည်နှက်နေခဲ့ပြီး
ရဲတပ်ဖွဲဝင်များနှင့် ရပ်ကွက်လူထုအကြား တရားခံထုတ်ပေးရေးအတွက် အားစမ်းမှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ည(၂း၀၀)ခန်ထိ
ကြည့်ရတာ ၊ အဲဒီရပ်ကွက်မှာ အရင်ကလဲ ကလေး အခိုးခံရဖူးတယ် ထင်တယ်နော်
ကလေးသူခိုးကို ဒီလောက် ချစ်ချင်ကြပုံ ထောက်ရင် ။ ခိုးတဲ့ကောင်တွေ ကို ဘာရည်ရွယ်ချက် နဲ့ ခိုးကြတာလဲ ဆိုတာလေး မေးမြန်းပြီးရင် ထပ်တင်ပေးပါဦး ကိုဘီလူးရေ
အချုပ်ကားလေး ဘာလေးများ လာပါတော့လား…
ခဲနဲ့ ပစ်တဲ့ကောင်တွေကလဲ ကလေးသူခိုးဖြစ်ဖြစ် ရဲဖြစ်ဖြစ် ထိချင်ရာထိဆိုပြီး ပစ်နေလား မသိပါဘူးဗျာ …
ကလေးသူခိုးတော့ မပြောတတ်ဘူး ။
ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူသင့်ပါတယ် ။
ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် လူအုပ် နှင့်မှ သတ္တိပြရဲတဲ့ လူ့ ငတုံးတွေ ။
ဆွမ်းကြီး ဝိုင်းလောင်းချင်တဲ့ လူ့အောက်တန်းစား တွေကြောင့် ။
တိုင်းပြည်ကို သူတို့နှင့် ထိုက်တန်တဲ့
လူရိုင်းတွေကပဲ အုပ်ချုပ်နေတာပါ ။
ကဒါဖီကိုဝိုင်းသတ်တဲ့ လစ်ဗျားတွေကျနေတာပဲ ။
ဒါမျိုးတွေကို တာဝန်ရှိသူများ အပိုင်းက ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူပြတာ၊ ပြည်သူကို သတင်းအမှန်ကို ထုတ်ပြန်ခွင့်ပေးတာ မျိုးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကျုပ်အိမ်နဲ့ ဆိုရင် ငမိုးရိပ်ချောင်းကြီးခြားနေပါတယ်
ကြိုးတံတားကနေ ကူးသွားမှေ၇ာက်တာပါ
ရောက်သွားတော့လူအုပ်ကြီးက ဆိုင်ကယ်ဝင်မရလောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့အပြင်
ကျုပ်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသောအားကိုယ်ရာဖုန်းကင်မရာက လဲအိမ်က ဘီရိုပေါ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်
ရေချိုးနေရင် သတင်းကြားလို့ ထထွက်သွားတာ ဓါတ်ပုံ မရိုက်လိုက်နိုင်တာခွင့်လွတ်ပါဗျာ..။။
ဒါ့ကြောင့်မို့လည်း nozomi က ကြော်ငြာတာ။
လာမပြောနဲ့ ဘီလူးကြီး MG မှာ တင်ပြီးသား :laugh:
အချိန်နဲ့ တပြေးညီတင်ပေးနိုင်လို့ ရွာရဲ့ဂုဏ်ကို တက်စေပါတယ်။
အဲဒီနေ့ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးလဲပါတယ်ဆို၊ အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတစ်ဦး ကြိူးတံတားပေါ်ကခုန်ချသွားတယ်ဆိုတာ ပာုတ်သလား
ကလေးတွေ ဘာကြောင့် ခိုးတာလဲ ။ ဘယ်သူက ညွှန်ကြားတာလဲ သေသေချာချာ တိတိကျကျ လိုက်သင့်တယ်ဗျာ။
ဘယ်လိုအကြံအစည်တွေနဲ့ ကလေးတွေ အဖွဲ့လိုက်ခိုးပြီး ဒီလိုလုပ်ကြတာလည်းမသိဘူးနော်။ အိမ်ဘက်မှာလည်း ဖမ်းမိတာ ကြားရပါတယ်။ ရပ်ကွက်က ၀ိုင်းထုလို့ ရပ်ကွက်လူကြီးကနေ ရဲစခန်းကို မနည်းခေါ်သွားရတယ်ကြားရတယ်။ အဲဒီခိုးတဲ့သူက မိန်းမလို့ပြောတယ်။ အဲဘက်မှာက အမျိုးသားတွေပဲ တစ်ဖွဲ့ထဲများဖြစ်နေမလား….
ကလေးခိုးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ခိုင်းစားမယ် ရောင်းစားမယ် ကိုယ်အင်္ဂါဖြတ်ပြီးရောင်းမယ်။ မိန်းမလေးဆိုရင် ကြီးအောင်ထားပြီး ပြည့်တဆာလုပ်ခိုင်းမယ်။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရောင်းစားဖို့တော့ မဖြစ်နှိုင်ပါ …
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟိုဟာတွေလဲ အများကြီး …
ကိုယ်အင်္ဂါဖြတ်ရောင်းဖို့ဆိုတာလဲ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ သိပ်တွင်ကျယ်သေးတာ မဟုတ် …
ကုတဲ့သူတွေ အားလုံးက ပိုက်ပိုက်တတ်နှိုင်ရင် နိုင်ခြံကားကိုပဲ သွားကြတာ …
ချက်ချင်းကို ပြည်ပကို ပို့ဖို့ထင်တယ် …
တစ်ဖွဲ့ထဲတင် မဟုတ်လောက်ဘူး ….
နောက်အဖွဲ့ တွေရှိလောက်သေးတယ် …
လက်လွှတ်စပယ်မလုပ်ပြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ် ( အထင်ပါ )
ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး လူအုပ်ထဲမှာ သူ့အဖွဲ့ရှိခြင်ရှိနေမှာ
ပြဿနာဖြစ်တော့ လုအုပ်ကြီးနဲ့ရောပြီး တရားခံကို နှုတ်ပိတ်လိုက်မှ
အဲ့သည်ကလေးသူခိုး ကျမ္မာပါစေဗျာ ဒါမှ အမှု့မှန်တွေပေါ်မှာ
နောင်များကြုံရင်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်ဆင့်ကမ်းပညာပေးကြပါဦး
ကျုပ်တို့ရွှေမျိုးတွေ တော်တော် အသိတရားနည်းပါးနေပါပေါ့လား
ဘုရား ဘုရား ဘယ်ဘုရားရွှေရှိပါလိမ့် :D
အရှေ့ဒဂုံမှာလည်း ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားရပါတယ်…..
ရပ်ကွက်က ရဲလက်ကို အပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပါကြားလိုက်ရပါတယ်…..
ဒီနေ့ထုတ်တဲ့ The Voice Journal မှာပါလာတာကျတော့ အဲဒါတွေက ကောလဟာလတွေပါဆို……The Voice ကပြောထားတာကျတော့ မသမာသူတွေက သတင်းတွေလျှေက်လျွှင့်နေတာတဲ့….ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး…..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကို တော့အလုပ်တွေအပျက်ခံပြီးတော့ စောင့်ကြည့်နေရတယ်။
ခလေးသူခိုးအဖွဲ့ နယ်စုံမှာဖြစ်တော့ကျယ်ပြန့်ပုံရတယ်။ လမ်းကျွမ်း နယ်ကျွမ်း ပုံရတယ်။ ကားနဲ့လာတာဆိုမြေပုံကိုကြိုလေ့လာပုံရတယ်။ကားနဲ့ဆိုသာမန်ပြည်သူတွေ လိုက်မိဖို့မလွယ်ဘူး။ ကားကိုဖမ်းဖို့ လမ်းရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေမှာ ခိုင်မာတဲ့ လမ်းတား တွေနဲ့ စံနစ်ကျတဲ့ သံချောင်းခေါက်အချက်ပေးတာတွေ CCTV camrea တပ်တာတွေ ရပ်ကွက်တွေမှာကင်းပုန်းဝပ် (အိမ်ထဲက သတိထားပြီး အိမ်ရှေ့လမ်းကိုပြည်သူတိုင်း သတိထား စောင့်ကြည့်ဖို့) လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ တယောက်တည်း မသွားဖို့သတိပေးဖို့။ ပြည်သူတွေ မသင်္ကာစရာတွေ့ရင် သတင်းပေးဆက်သွယ်ဖို့ဖုံးနံပါတ်တွေ ပေးပြီး စည်းရုံးပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြရင်အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။သူတို့က ပတ်ဝန်းကျင်ကနေစောင့်ကြည့်နေပြီး လူပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆေးသုံး ဖမ်းတော့ အော်ဖို့ရုန်းဖို့ အခြားလူသိဖို့ အခွင့်အရေးနဲတာထင်တယ်။ မိထားတဲ့သူကိုလည်း ကိုရင်မောင်ပြောသလို စစ်ဆေးချိန်မှာ လုံခြုံရေး အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်း ဒေါသနဲ့ ဒီတရားခံတယောက်ကို သတ်ပြစ်ပြီးနောက်လူတွေကိုဆက်ခိုးခံမှာလား။ ဒီတရားခံကိုစစ်ဆေးပြီး ဒီဂိုဏ်းကိုဖော်ထုတ်ပြီး အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းမလားဆိုတာအကျိုးအကြောင်းပြောပြရင် ကြေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြောရုံနဲ့မပြီးပဲ လက်တွေ့ ဖော်ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခိုးပြီး ပြည်ပကို ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံစံနဲ့ခိုးထုတ်နိုင်မလဲ။ တကယ်လို့ဗိုက်ခွဲကလီစာသယ်မယ်ဆိုရင် ရေခဲဗူးလိုဟာမျိုးလိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီသတင်းက ကြားတာ ကောလဟာလလိုလိုနဲ့ တော်တော်လေးကြာနေလို့ တော်တော်ပိရိပြီး သေသပ်တဲ့ ဂိုဏ်းကြီးတဂိုဏ်း ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။
လူတွေက စိတ်ဆိုးပြီး ၀ိုင်းရိုက်တာနဲ့ စစ်ဆေးလို့ မရပဲ ဖြစ်သွားမှာ စိုးရတယ်။
စစ်ကြောရေး စခန်းများ ရောက်သွားရင် မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး မရမက ရအောင် စစ်မှာ.. အဲဒီကို ရောက်သွားရင်တော့ တော်တော် ဒုက္ခများလိမ့်မယ်။
Nyein မန်းတာကိုဖတ်ပြီးThe Voice Journal ဂျာနယ် အင်တာနက်ထဲမှာဖတ်ကြည့်ပြီးပြီ
The voice ကပြောတဲ့..ကောလဟာလဆိုတာ မြောက်ဥက္ကလာ ဘက်က သတင်းကိုပြောတာနေမယ်
ခုတလော ခလေးခိုးတာတွေ တော်တော်များလာတယ်
ရွာထဲမှာ..ကလေးအဖေတွေရှိရင် ကိုယ့်သားသမီး ဂရုစိုက်ကြ
ပေါ်ပျူလာ ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရတာ..တစ်ခုက
လှိုင်သာယာဘက်က ခလေသူခိုးလဲ မိတယ်ကြားတယ်..
ခလေးခိုးပြီးတော့ ဆူးလေဘက်မှာ တောင်းစားခိုင်းတာ..
ခလေးက တစ်နေ့ သုံးထောင် တောင်းပေးရတယ် ပြောတယ်……
ရဲက..မသင်္ကာလို့ စောင့်ဖမ်းတာ မိသွားတယ်ပေါ့ဗျာ..
ဟုတ်ပါတယ် ကိုပေါက်ဖေါ်ရေ သူတို့သတင်းတွေကလဲ
( ဒီနေ့တစ်ခေါက်ထပ်စုံစမ်းပါအုံးမယ် ) လို့ပြောတဲ့ ကိုဘလူးကြီး
၀ိုင်းဆွမ်းကြီးလောင်းကြတယ် ဆိုတာလဲ သူတို. မခံမရပ်နိုင်ကြလို.နေမှာပေါ့ စစ်ဆေးဖို.ပို.လိုက်ရင် ကိုယ်မမြင်ရပဲနဲ. ဇတ်လမ်းပြီးသွားမှာစိုးလို.နေမှာပေါ့.. အဲဒါကတော့ လူအများက ဥပဒေကို မယုံကြလို.ပါ…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲလို သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းမစာ တဲ့ ကောင်းမျိုးတွေကို ပက်ပက်စက်စက် အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်ဗျာ..
အဲ့ လို ကလေး ခိုးတဲ့ ကောင်တွေ ကို ကောင်းကောင်းကြီးအပြစ် ဒဏ်ပေး သင့် တယ်။နောက်ပြီး ကလေးတွေကို တောင်းစားခိုင်းတဲ့ ကောင်တွေ ထောင်ချတာ ၁ နှစ်က နဲတယ် အနဲ ဆုံး တစ်သက်တစ်ကျွန်းပေးသင့်တယ်။